Kadikoy-Kartal tareenka dhulka hoostiisa ka furay 19. sugaya muwaadiniinta maalinta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFuritaanka madaarka Kadikoy-Kartal waa 19. sugaya muwaadiniinta maalinta
05 / 09 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, Metro, TURKEY
Waxaa suurtagal ah in la helo meel u dhaxaysa 32 km, 22 iyo xataa xitaa xoogga shaqada ee subaxa, taas oo hoos u dhigaysa masaafada u dhexeysa Kadikoy iyo Kartal ilaa daqiiqo 16. Marka la barbardhigo subagyada yaryar ee yurubiyaanka ah, khadka Kadikoy-Kartal waa aamusnaan. Waxaa suurtagal ah in la helo gabadh yar oo ka shaqeysa raaxada booska baabuurta, si fudud u akhriyaya buugeeda iyo wargeyska, iyo dad badan oo hurda inta lagu jiro safarka. Muwaadiniintu waxay isku raaceen in tareenka uu yahay mid nadiif ah, qurux badan oo degdeg ah. Si kastaba ha noqotee, dhibaatada ugu weyn ee ay ku hayaan rakaabkii aan la hadalnay waa dhibaatada gaarsiinta xarumaha metro.
Wariyayaasha muwaadiniinta ah waxay la hadlayaan rabitaanka guud ee muwaadinka si ay u gaaraan giraanta tareenka, baska ama minibus si loo dhigo. Sababtoo ah ma jirto baabuur si loo gaaro adeegga tareenka ee isbarbardhigga ah asfaltarka Ankara, labadaba ka sareeya E-5 iyo xeebta. Cabasho kale waxay tahay in joogsiga u dhaxeeya Maltepe iyo Kozyatağı ay dheer yihiin. Codsi kale oo muhiim ah oo loogu talagalay tareenka ayaa ah xoojinta safka Pendik iyo Tuzla halkaas oo xarumaha ganacsiga ay ku badan yihiin dhinaca Anatoliyaanka.
Wareegga mashruuca, xariiqda 700 kun oo rakaab ah ayaa la qorsheynayaa inay ku safraan maalin kasta waxay hadda isticmaalaan qiyaastii kun qof maalintii. Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in tirada rakaabku ay gaari doonto heerka bartilmaameedka leh furitaanka dugsiyada iyo xeerka gaadiidka dadweynaha.
Iskudhafka mitrooga leh metrobus ee Uzunçayır ayaa sidoo kale ka dhigtay kala-guuraaga ka yimid Anatolia ilaa dhinaca Yurub oo aad u raaxo badan. Rıdvan iyo Star Aydın oo aan wada hadal la lahayn, "Maalintii kale waxaan u soo booqannay bukaankayaga ku yaala Chapa adoo isticmaalaya metro iyo metrobus saacadda Maltepe 1.5. Hadda waxaan ku faraxsanahay inaan gaari karno baabuurkeena guriga. Sababtoo ah darawalnimada waddadani waa mashquul, "ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay muwaadiniinta, oo kale oo tafaftirka tareenka ayaa ah in Istanbul ay isku xirto gobollada u dhow magaalada Izmit.
Magaalooyinka Kadikoy-Kartal waa metro ugu weyn taariikhda Jamhuuriyadda?
Isgaadhsiinta Qaadashada Kadikoy-Kartal Metro
Booliiska Wadooyinka ayaa Sheegay Shukulaataha Maalinta Haweenka
Kadibo-Kartal line line waxaa dib loo dhigay July
98 Boqolleyda Kadikoy-Kartal Tilmaame Mareenka
Nidaamka Xakamaynta ee ELMAK - Mashruuca SCADA KADIBÖY KADIKÖY KARTAL KARTALKA SCADA
Magaalada caasimada ah ee Magaalada Kadıköy - Mashruuca Subway Subway ee Ayrılıkçeşme…
Tareenka Nostalgic wuxuu abuuraa Uğurlu fekerka
Sehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Street waxaa lagu xiray gaadiidka sababo la xiriira shaqo-abuurista dheeraadka ah